''ဗီလိန် ကာရိုက်တာကို အမြဲတမ်း လာငှားနေမှာစိုးလို့ တချို့ဇာတ်ကားတွေ လက်မခံဖြစ်ဘူး'' ချမ်းမင? - Yangon Media Group
”ဗီလိန် ကာရိုက်တာကို အမြဲတမ်း လာငှားနေမှာစိုးလို့ တချို့ဇာတ်ကားတွေ လက်မခံဖြစ်ဘူး” ချမ်းမင?
လက်ရှိရိုက်ကူးနေတဲ့ ‘၃(က)’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်သရုပ် ဆောင်နေတဲ့ သရုပ်ဆောင်ချမ်းမင်းရဲထွဋ်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း။
မေး-”၃(က)” ဇာတ်ကားထဲက ကာရိုက်တာက အရင်က ကိုယ်ရိုက်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားတွေနဲ့ ဘယ်လိုကွာခြားမလဲ။
ဖြေ-ဒီဇာတ်ကားက ကာရိုက်တာကတော့ အရမ်းကို ရိုးရှင်းပါတယ်။ကျွန်တော်အရင်ကရိုက်ခဲ့တဲ့ ”ည”တို့၊ ”သမ္မတကြီးထံပေးစာ”တို့ အဲဒီဇာတ်ကားတွေမှာဆိုရင် ကျွန်တော့်ကာရိုက်တာက ဗီလိန်ကာရိုက်တာ တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ ရိုးရှင်းတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ရမယ်။ ကျွန်တော့်ပရိသတ်တွေတော်တော်များများကလည်း ကျွန်တော့်ကို ဒီလိုကာရိုက်တာမျိုးလေးရိုက်စေချင်ကြတယ်။ ဒီ ”၃(က)”ဇာတ်ကားထဲက ကာရိုက်တာမျိုးက ကိုယ်တိုင်လည်း တစ်ခါမှမလုပ်ဖူးတာကြောင့် ကျွန်တော့်အတွက် အခက်အခဲနဲ့စိန်ခေါ်မှု တွေ ရှိပါတယ်။
မေး-အခုနောက်ပိုင်းရော ဗီလိန်ကာရိုက်တာတွေ လာရောက်ကမ်းလှမ်းတာတွေရှိလား။
ဖြေ-”သမ္မတကြီးထံပေးစာ” ဇာတ်ကားပြီးသွားတော့ ကျွန်တော့်ကို ဗီလိန်ကာရိုက်တာတွေမှာ သရုပ်ဆောင်ဖို့ထပ်ပြီးလာငှားတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဆရာတွေကလည်း ဗီလိန်ကာရိုက်တာကို အများကြီး မရိုက်ဖို့လည်း ပြောတယ်။ နောက် ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဒီကာရိုက်တာကိုပဲ အမြဲလာငှားနေမှာကြောင့် တချို့ဇာတ်ကားတွေမရိုက်ဖြစ်လိုက်တာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ လုံးဝဗီလိန်အသားပေးထားတဲ့ ဇာတ်မျိုးဆိုရင်တော့ ရိုက်ချင်ပါတယ်။
မေး-ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ ကာရိုက်တာကရော ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်မလဲ။
ဖြေ-နောက်ပိုင်း ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ ပုံစံမျိုးကတော့ ကိုယ်မလုပ်ဖူးတဲ့ကာရိုက်တာတွေ ရိုက်ဖြစ်မယ်။ ကိုယ်တိုင်က ဘယ်လိုကာရိုက်တာနဲ့ ကိုယ်ကလိုက်တယ်ဆို တာမျိုးလည်း မသိတာကြောင့် ကာရိုက်တာအစုံတော့ လုပ်ကြည့်ချင်ပါတယ် ။
မေး-ဗီလိန်ကာရိုက်တာ အရိုက်များတာဆိုတော့ ဟာသကာရိုက်တာတွေရော လုပ်ဖူးလား။
ဖြေ-ဒီ”၃(က)”ဇာတ်ကားမရိုက်ခင်မှာ ကျွန်တော်”ပုရိသ”ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးမှာ ကျွန်တော့်ကာရိုက်တာက ဟာသလုပ်ရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက် အသစ်အဆန်းဖြစ်ရပါတယ်။
မေး-”၃(က)”ဇာတ်ကားမှာ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင် စိုးမြတ်သူဇာနဲ့ တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုခံစားချက်မျိုးရှိမလဲ။
ဖြေ-မစိုးမြတ်သူဇာနဲ့က ကျွန်တော်ဒီဇာတ်ကားမှာ ပထမဆုံးတွဲဖက်ပြီး သရုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်သူ့ကို ငယ်ငယ်ကတည်းက အရမ်းလည်းအားကျတယ်။ တော်တော်ကြိုက်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးဖြစ်တာကြောင့် အခုလိုတွဲဖက်ပြီး သရုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ အရမ်းကိုပျော်ပါတယ်။
''ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အမှားကို ဝေဖန်လို့ ရပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ Sexy ပုံတွေ မရိုက်ဖြစ်တော့ပါဘူး'
'တရုတ်မလေးကို ချစ်တယ်'အချစ်ဟာသ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား မကြာမီပြသမည်